ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.10/No.4
ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ သံတော်ဆင့် အပတ်စဉ်သတင်း၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၄၇)
စစ်တပ်ဓာတုစက်ရုံသတင်းကြောင့် ယူနတီ သတင်းထောက်နှင့် အယ်ဒီတာချုပ်ဖမ်းဆီးခံရ (ရုပ်/သံ)
ဓာတုစက်ရုံကိစ္စ ရေးသားဖော်ပြမှုကြောင့် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက် အက်ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်
ဗိုလ်ချုပ် နယူးဒေလီတွင် နေရူးနှင့် တွေ့စဉ်က ... [၁၉၄၇-ဇန်နဝါရီ] (ရုပ်/သံ)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ယာဉ်တန်း ချိန်ကိုက်မိုင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရ၊ သတင်းထောက်နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
မန္တလေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ပြင်ဦးလွင်အသွား မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခံရ
ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းနေ့ စဉ် သတင်းစာ
ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံနေ့ စဉ် သတင်းစာ
မန္တလေးတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်ရဲ့ယာဉ်တန်း မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခံရ (အသံဖိုင်)
Posted: 01 Feb 2014 06:47 AM PST
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အစိုးရက စီစဉ်ထားတဲ့ မနက်ဖြန် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ဒီကနေ့မှာ အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့ ထောက်ခံသူတွေ အကြား ဘန်ကောက်မြို့မှာ တဘက်နဲ့ တဘ်က ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် အကြမ်းဖက် မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်တာတွေ နဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့ မြောက်ဘက်ပိုင်း ထိပ်တိုင်ရင်ဆိုင်ပွဲ မှာတော့ ဗုံးတွေပစ်သွင်း သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေ ကြောင့် လူအတော်များ များ ဒဏ်ရာ
Posted: 01 Feb 2014 05:56 AM PST
ကလေး၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ခုံတိုးကျေးရွာတွင် သမက်ဖြစ်သူမှ ယောက္ခမ၏ လည်ပင်းအား ဓားဖြင့်လှီး၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့သ ဖြင့် ယောက္ခမဖြစ်သူ သေဆုံးသွားရသည့် လူသတ်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ် ယခုလ ၂၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကလေးမြို့မရဲစခန်းရှိ တာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ သေဆုံးသူမှာ ကလေးမြို့နယ်၊ ခုံတိုးမြို့သာကျေးရွာနေ ၊ ဒေါ်လှလေး အသက် ၇၆ နှစ် ဆိုသူဖြစ်သည်။ေ
Posted: 01 Feb 2014 05:27 AM PST
ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နယ်နိမိတ်အစပ်တွင်ရှိသော အိမ်ခြေ လေးရာကျော်ရှိသည့် သမီးကလေးကျေးရွာအား လှည်းကူးမြို့ နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ထိုရွာသည် တပ်မတော် ကျောင်းကြီး (၃)ကျောင်း၏မြေဟုဆိုကာ ဖယ်ရှားမည်ဟု အမိန့်စာထုတ်ထားပြီး အဆိုပါရွာသူရွာသားများက ဖယ်မပေးဘဲ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်နေသည်။ အဆိုပါရွာကို ဇန်န၀ါရီ ၂၈ ရက်တွင် နောက်ဆုံးဖယ်ရှားရမည်ဟု လှည်းကူးမြို့နယ်
အမြင့်ပေ လေးထောင်ကျော်ရှိသော ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရိုးမတောင်တန်းကြီး ပေါ်ရှိ လမ်းမကြီးဘေး ထူထပ်နေသော ချုံနွယ်များ နောက်တွင် တစ်လကျော်သက်တမ်းရှိ ဘိန်းပင်များ စိမ်းစိုစွာ ပေါက်ရောက်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးဖြစ်သော ရှမ်းပြည်နယ် အပါအဝင် အခြားပြည်နယ်များ တွင်လည်း အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများက ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း
ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.10/No.4 ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ သံတော်ဆင့် အပတ်စဉ်သတင်း၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၄၇) ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 01 Feb 2014 04:46 AM PST
မကွေးတိုင်း ပေါက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ဓာတုစက်ရုံကိစ္စ ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယူနတီဂျာနယ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးတင့်ဆန်းနဲ့ သတင်းထောက်တွေကို သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ပေါက်မြို့နယ်ဒေသခံ သတင်းထောက် ကိုလူမော်နိုင်ကိုတော့ ဒီနေ့မှာ ပေါက်မြို့နယ်တရားရုံးက နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက် အက်ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်လိုက်ပြီလို့ ဇနီးသည် မလွင်လွင်က ပြောပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Unity
Posted: 01 Feb 2014 04:25 AM PST
မကွေးတိုင်း ပေါက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ဓာတုစက်ရုံကိစ္စ ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယူနတီဂျာနယ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးတင့်ဆန်းနဲ့ သတင်းထောက်တွေကို သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ Unityဦးတင့်ဆန်းကို ရန်ကုန်မြို့က ဂျာနယ်တိုက်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် မနက်ပိုင်းက လာရောက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီး နယ်မြေခံ သတင်းထောက်ကိုတော့ မနေ့ကတည်းက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးတင့်ဆန်းကို
Posted: 01 Feb 2014 04:11 AM PST
မကွေးတိုင်း ပေါက်မြို့ရှိ မြန်မာစစ်တပ်ပိုင် လျှိုဝှက်ဓာတုလက်နက်စက်ရုံ အကြောင်း သတင်း ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည့် Unity ဂျာနယ်၏ သတင်းထောက်ကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်များ ပေါက်ကြားသည့်ဥပဒေဖြင့် အကျဉ်းချဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးနောက် ဂျာနယ်ပိုင်ရှင် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးတင့်ဆန်းကို ရန်ကုန်မြို့၌ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထပ်မံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဦးတင့်ဆန်းကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီး ၃နာရီခန့်အကြာ ဂျာနယ်တိုက်ရှိေ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့တွင် ယူအန်နှင့် အိုင်အန်ဂျီအိုများ ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြရန် လူပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်စုရုံးပြီးမှ အာဏာပိုင်များက ခွင့်မပြုသဖြင့် ယနေ့ ဆန္ဒပြမည့် အစီအစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းပြီး လာမည့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်သို့ ရွှေ့လိုက်ရသည်ဟု ဆန္ဒုပြပွဲ စီစဉ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဖြစ်သူ ဦးသန်းလိူင်က နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။ “ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှာ လူပေါင်း တစ်ထောင်ကျော် ဘူးသီးတောင်မြို့
Posted: 31 Jan 2014 09:17 PM PST
“ အောင်ဆန်းဇာနည် ” ~~~~~~~~~~~~ “ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ တစ်ထောင့်ကိုးရာ တစ်ဆယ့်ငါး ရှေ့နေဦးဖာ သား ဇာတိနတ်မောက် မကွေးခရိုင် သိကြများခုတိုင် ကြံ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ ဇာနည်ဘွား မိခင်ဒေါ်စုသား တစ်ထောင့်ကိုးရာ လေးဆယ့်ခွန် ပြောင်းကြွတမလွန် မျက်ရည်သွန်လို့ ဘ၀င်ညှိုး ဇူလိုင် တစ်ဆယ့်ကိုး ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဗိုလ်ချုပ် ဒို့ဖခင် ကောင်းစေချင်တဲ့ အမှာစကား ငါတို့ မမေ့အား ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်များ
Posted: 31 Jan 2014 08:32 PM PST
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ တစ်လလျှင် ကျပ် ၁၂၀၀၀၀ နှင့်အထက် ရရှိသော အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဝန်ထမ်းများ အားလုံး ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေအရ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်၍ အခွန်ကြပ်မတ် ကောက်ခံတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ အိမ်ထောင်သည်များက တစ်လလျှင် ကျပ် ၁၈၀၀ ခန့် ပေးဆောင် ရမည် ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်မရှိသူ (လူလွတ်) များမှာ ကျပ် ၂၀၀၀ ကျော် ပေးဆောင်ရမည်ြ
Posted: 31 Jan 2014 08:29 PM PST
Vodka အရက်ကို အလွန်အကျွံသောက်တဲ့ ရုရှား နိုင်ငံသားတွေဟာ အသက်အရွယ် ငယ်စဉ်မှာ သေဆုံးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို အကြီးအကျယ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အကြောင်း သုတေသန ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း၊ Vodka အရက် သောက်သုံးသူ တသိန်းခွဲ ကျော်ကို သုတေသနလုပ် စစ်ဆေး တွေ့ရှိထားတာတွေကို Lancet ဆေးပညာ ဂျာနယ်မှာ ကြာသာပတေးနေ့က ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ့အထဲက အရက် အလွန်အကျွံသောက်တဲ့ လူ ရှစ်ထောင်လောက်ဟာ
Posted: 31 Jan 2014 08:16 PM PST
ကနေဒါ နိုင်ငံသား ပေါ့ပ် အဆိုတော် Justin Bieber ထိန်းသိမ်းခံရစဉ် အတွင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှု မရှိစွာ ကြိုးစားမှုနဲ့ မိုင်ယာမီ က အမျိုးသမီး ရဲအရာရှိ တယောက်ကို စုံစမ်း စစ်ဆေးနေတယ်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်က ရဲတွေက ပြောပါတယ်။ အဲဒီ အမျိုးသမီး ရဲအရာရှိဟာ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ အရေးယူခံရနိုင်တယ်လို့ မိုင်ယာမီ ကမ်းခြေရဲ ဌာန ပြောခွင့်ရသူ Bobby Hernandez ကြေ
Posted: 31 Jan 2014 08:04 PM PST
ဝါရှင်တန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံအသီးသီး၏ နိုင်ငံရေးစနစ်များ၊ လွတ်လပ်ရေး ရရှိသည့် နှစ်၊ လိုအပ်သည့် တိုင်းရင်းသား ပညာတတ် အသိုင်းအဝိုင်းရှိမှု မရှိမှု စသည့်အချက်ပေါင်း ဒါဇင်ပေါင်း များစွာကို လေ့လာ သုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာရှင် ဂျေးယူဖဒါက ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် နိုင်ငံများကို သုံးသပ် ခန့်မှန်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ထားသည်ကို Washington Post သတင်းတွင်
Posted: 31 Jan 2014 08:03 PM PST
နေပြည်တော်၊ မဇ္ဈိမ ။ ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီက ၎င်း၏သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ ကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ အချိန်မှီတင်သွင်းခဲ့အပြီး သုံးနှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့နှင့် တိုက်ဆိုင်သည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နဝမပုံမှန် အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ (၃၁. ၁. ၂ဝ၁၄) တွင် လွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာ၌ ထူးခြားစွာ ပါရှိသော ပုဒ်မ ၅၉(စ)၊ ၄၃၆၊ ၃၃၇၊ ၃၃၈၊ ၆(စ)၊ ၄၄၅ စသည့်
Posted: 31 Jan 2014 08:01 PM PST
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ် ဒိုးပင်ရွာနှင့် ဟိုခိုရွာအကြား မိုင်တိုင်အမှတ် (၃၀) နှင့် (၃၁) ကြား အရောက်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်နှင့် စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးတို့ လိုက်ပါလာသည့် ယာဉ်တန်းရှေ့ လမ်းပေါ်တွင် ချိန်ကိုက်မိုင်း ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ သတင်းထောက် နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ထုတ် ယူနတီ ဂျာနယ်မှာ ပေါက်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ဓါတုလက်နက် စက်ရုံလို့ ယူဆရတဲ့ စက်ရုံ ဓါတ်ပုံကို မျက်နှာဖုံး မှာ ဖော်ပြမိလို့ တပြည်လုံးက ဖြန့်ချီရေးတွေကို သက်ဆိုင်ရာက လိုက်သိမ်းနေတယ်လို့ ယူနတီ ဂျာနယ်ရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဦးတင့်ဆန်းက ပြောပါတယ်။ ပေါက် မြို့က ယူနတီ ဂျာနယ် သတင်းထောက် ကိုလည်း ခေတ္တ ခေါ်ယူ မယ်ဆိုပြီး ဖမ်းထားတယ် ၊ အခုတော့ ရဲစခန်းမှာ စစ်ကြောနေလို့ အမှု မဖွင့်သေးဘူးလို့ သူက
ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက် ညနေ ၃နာရီဝန်းကျင်က မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်ရဲ့ယာဉ်တန်း မန္တလေးတိုင်းနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်အစပ် နောင်ချိုမြို့နယ်ထဲက မိုးကုတ် ပြင်ဦးလွင်သွား ကားလမ်းမှာ မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါ သတင်းယူတဲ့ မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာက သတင်းထောက် ကိုမဲကြီး(ခ) မန်းကိုကို နဲ့ မန္တလေးတိုင်း သတ္တုတွင်းဝန်ကြီး ဦးသန်းစိုးမြင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ၁ယောက် ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ရရှိသွား ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ အမိန့်နဲ့ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တာ ၁ နှစ်ခွဲရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကိစ္စကို - မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး လိုကြောင်း China Power Investment – CPI ကုမ္ပဏီရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ကချင်လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့ KDNG က ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့က ကြေညာချက်ထုတ် တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်တွင်းမှာ CPI ကုမ္ပဏီက
ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းမှာ ဒီကနေ့ မြန်မာအစိုးရတပ်နဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်ဖွဲ့အကြား နေရာ ၄နေရာလောက်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ထပ်မံဖြစ်ပွားနေတယ် လို့ ဒေသတွင်းက ဒုက္ခသည်အရေး ကူညီသူတဦးက ပြောပါတယ်။ ဗန်းမော်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကတော့ ဒီမနက်က တိုက်ပွဲတကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ သိရကြောင်းနဲ့ ကျန်သတင်းတွေတော့ မရသေးကြောင်းပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲဟာ သစ်မှောင်ခိုထုတ်သူတွေကို တပ်မတော် စစ်ကြောင်းတွေက
Posted: 31 Jan 2014 12:54 PM PST
ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းနေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံနေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 31 Jan 2014 11:42 AM PST
ဒီကနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက် ညနေ ၃နာရီဝန်းကျင်က မန္တလေးတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်ရဲ့ယာဉ်တန်း မန္တလေးတိုင်းနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်အစပ် နောင်ချိုမြို့နယ်ထဲက လမ်းခုလတ်မှာ မိုင်းဆွဲ တိုက်ခံရလို့ လိုက်ပါသတင်းယူတဲ့ သတင်းထောက်တဦးနဲ့ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ၁ယောက် ဒဏ်ရာရရှိသွားလို့ မန်းဆေးရုံမှာ ကုသခံနေရတယ်လို့ မန္တလေးတိုင်း သတင်းတပ်ဖွဲ့မှ ခုလို အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ အသံဖိုင် နားဆင်ရန် ဒီနေရာကို နှိ
Posted: 31 Jan 2014 11:32 AM PST
" ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အခန်း ၁၂၊ ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို မထိမတို့ မကိုင်တွယ်ရင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာ လုံးဝဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး" သူရ ဦးအောင်ကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ